Actorylọ ọrụ Nkwado Wrist - China na-emepụta ndị na-akwado Wrist na-eweta, Ndị na-eweta ya
Na-akwado ọgwụgwọ nke akwara na akwara ndị mebiri emebi, na-enye ume dị elu, na-enyere aka ichebe aka aka. Na-enyere aka ịmachi mmegharị aka iji mee ka obi sie gị ike. Akụrụngwa nchekwa nchekwa dị mma maka ndị okenye hụrụ egwuregwu egwuregwu n'abụghị nke e ji n’aka dịka ịgba ígwè, ịgba igwe, ịgba ọkpụrụkpụ, mgbatị ahụ. Akpụ ụkwụ isi mkpịsị aka maka nkwado na ijikọ ngwa ngwa
Mgbatị eriri ọkpọ
Na-akwado ọgwụgwọ nke akwara na akwara ndị mebiri emebi, na-agbanwe ume dị elu, ihe enyemaka dị mma iji kpuchido nkwojiaka, bụ mgbochi na ọgwụgwọ nke mmerụ egwuregwu ọ bụla. Na-enyere aka ịmachi mmegharị aka iji mee ka obi sie gị ike. Akụrụngwa nchekwa nchekwa dị mma maka ndị okenye hụrụ egwuregwu egwuregwu n'abụghị nke e ji n’aka dịka ịgba ígwè, ịgba igwe, ịgba ọkpụrụkpụ, mgbatị ahụ.
Fitness isi mkpịsị aka aka
Ọ na - enye aka na aka na-agbazi mbọ aka. Na-enyere aka ị nweta enyemaka site na mgbaàmà metụtara Carpel Tunnel Syndrome Plush, ịkwụ ọtọ na-enyere aka kpuchido nkwojiaka gị n'oge ụra. Kpụrụkpụrụ nkụ na-enyere mmadụ aka ịkwalite ọnọdụ aka na-anọpụ iche n'oge ụra. Nkwuputa nkwụpu enwere ike iwepu maka nkwado ahaziri Dabara na aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Na-agba ume, na-adịgide adịgide ma dị nro.
Aluminium efere aka nkwojiaka